Sida loo kiciyo qaabka madow ee otomaatiga ah ee Telegram | Androidsis
Sida loo kiciyo habka madow ee otomaatiga ah ee Telegram
Cusbooneysiinta Telegram Waxay u oggolaadeen inay sii wanaajiyaan waqti ka dib, iyaga oo tallaabo hore u qaadaya codsi ku koraya isticmaalka farriimaha degdegga ah Injineerada telegram ayaa fuliyay hab mugdi ah, shaqo kuu oggolaaneysa inaad keydiso korontada taleefanka habeenkii, indhaha naso oo fududeyso akhriska.
Waxaa jira laba fursadood oo lagu kicin karo habka mugdiga ah, buuga iyada oo loo marayo goobaha dalabka iyo mode auto mode mugdi ah, ka hawlgalaya 22:00 ilaa 08:00 saac. Habkani wuxuu leeyahay firfircoonaan oo waa la joojiyaa marka uu gaaro waqtiga xiritaanka.
1 Sida loo kiciyo hab madow oo otomaatig ah
2 Otomaatiga ah, ikhtiyaar wanaagsan
Sida loo kiciyo hab madow oo otomaatig ah
Haddii aad go'aansato inaad dhaqaajiso habka madow ee otomaatiga ah Waa inaad sugto ilaa 22:00 pm si aad ugu raaxeysato howshan qaabkan, laakiin haddii aad rabto inaad had iyo jeer hawlgaliso, waxaad si dhakhso leh ugu hagaajin kartaa barnaamijka. telegraam. Xusuusnow inaad ku laaban karto qaab caadi ah adoo galaya dejinta.
Si aad udhaqaajiso qaabka mugdiga tooska ah, u fur arjiga 'Instagram', qeybta hoose dhagsii "Settings", "Settings" ka raadi qaybta "Settings" taas oo noqon doonta wax yar Waxaad heli doontaa “Qaabka madow ee otomaatiga ah” oo la demiyay, dhaqaaji ikhtiyaarkan oo guji "Automatic dark mode" si aad u doorato "Jadwalka", xitaa waad beddeli kartaa saacadaha 22: 00 illaa 08: 00 saacadaha aad inta badan isticmaasho habeen-barqin.
Markaad tan doorato, codsiga Telegram-ka ayaa dooran doona muujin doonaa hab mugdi ah kaas oo ku imaada si otomaatig ah waqtiga aad dejisay, haddii tusaale ahaan ay tahay 21:30 pm ilaa 07:30 a.m. wuxuu ku tusi doonaa auto mugdi mode waqtiyadaas oo uu ku soo rogay isticmaalaha.
Otomaatiga ah, ikhtiyaar wanaagsan
Haddii aad rabto inaad si otomaatig ah u kiciso, tani waa mid ka mid ah shaqooyinka muhiimka ah ee codsi kuu oggolaanaya inaad ka hor mariso kuwa kale iyada oo ay ugu wacan tahay qaabeynta weyn. Telegram horeyba waxaa u isticmaali jiray in ka badan 400 bilyan oo isticmaaleyaal firfircoon adduunka oo dhan iyo koboca ayaa sii ahaanaya mid muhiim u ah maalinba maalinta ka dambaysa barnaamijkan la bilaabay 2013. Sidoo kale wuxuu gaarayaa 500 milyan oo soo degsasho ah codsiga ee ku saabsan Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo kiciyo habka madow ee otomaatiga ah ee Telegram
Realme C15 ayaa loo soo saaray iyada oo ah telefoon aad u raqiis ah oo leh batari dhan 6000 mAh iyo kamarad afar gees ah.
Lacagta degdegga ah ee loo yaqaan 'Quick Charge 5.0' ayaa mobilka ka qaada 50% 5 daqiiqo gudahood